Utitinywe wafa odlwengule ugogo | Isolezwe
Utitinywe wafa odlwengule ugogo
Isolezwe / 27 February 2013, 10:50am / MBALI KHANYILE
ISALUKAZI esidlwengulwe ngowesilisa obeqashe emzini waso Isithombe:MBALI KHANYILE
UMPHAKATHI waseziMbokodweni eNingizimu yeTheku utitinye owesilisa (35) wakule ndawo waze wafa emuva kokuba ebanjwe oqotsheni ephezulu kwesalukazi (87) esidlwengula entathakusa ngeSonto.
Lo mlisa ushonele esibhedlela iPrince Mshiyeni ngoMsombuluko. Umkhosi kuthiwa uhlatshwe wumzukulu walesi salukazi emuva kokubona lo mlisa egunjini lokulala lesalukazi esekhumule izicathulo nezimpahla zokugqoka edlwengula.
Ilandisa ngalolu daba indodana kagogo odlwenguliwe ithe lokhu kwenzeke ngezintathakusa ngabo-1 ngeSonto.
Ithe lo mlisa obese kuphele unyaka ehlala kubo ubevele engumuntu ongaqondakali ukuthi uphila mpiloni njengoba ebengesinye seziqashi kulo muzi kodwa ebe engasebenzi.
Uthi yize kunjalo bebengakaze bazitshele ukuthi uyoke abhozomele unina wabo njengoba bese bemthatha njengomunye welungu lomndeni.
“Ukube indodana yami ayizange ivuke emuva kokuzwa umama ekhala ngabe lo mgulukudu umbulele umama njengoba ebemklinya ngesikhathi emgila lo mkhuba. Kwakuhlaba umkhosi kwendodana kusize kakhulu ngoba ukube ayimemezanga ibiza umphakathi ngabe ubalekile,” kubeka indodana.
Sichaza ngesigameko isalukazi obekubonakala ukuthi siphazamisekile emqondweni sithe, lo mlisa owasigila lo mkhuba waqale wasishaya ngempama waphinde wasiklinya njengoba sasingazibekile phansi silwa naye ngesikhathi esibhudubeza.
“Wangicindezela umfana (emgagula ngegama) maqede wangiklinya emqaleni, ngazama ukulwa naye kodwa kwasho ukuthi unamandla kunami wagcina esekwazile ukungidlwengula. Wabe esegila umkhuba phezulu kwami kwaze kwasiza umzukulu owangizwa ngizama ukukhala kuleli gumbi engangikulona nale ndoda,” kuchaza lesi salukazi.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt Colonel Thulani Zwane, usiqinisekisile lesi sigameko waveza ukuthi amaphoyisa amatasa nophenyo.
“Akekho oseboshiwe ngalesi gameko njengoba amaphoyisa esaqhubeka nophenyo,” kusho uZwane.